rafozan-doza | Septambra 2009 | 2
Fa ny lelah ve dia tsy maintsy mampirafy e?
In a? Raha tsy miss vehivavy manaiky miaraka @ lelah efa manam-bady tsy hisy lehilahy hampirafy izany e. Misy vehivavy mampirafy koa anie ee, sahala ihany isika @ io lafiny io.
Fa manin kay ny vehivavy no mampirafy e?
Matoa izy izay mampirafy dia misy zavatra tsy ampy ao aminy ao. Na tambitamby io na fitiavana na hoe fahafahana tsotra izao. Ny ara-bola moa tsy lazaina intsony. Tsy eo aminareo ny toerana dia may vava ianareo.
Mba misy firy eo ho eo izao ny isan'ny olona miaraka @ olona tena @ 100% nonofinofisany ary mahafapo azy? misy ve ny hoe destin? anjara sy safidy hono izy io. Raha misy olona mifidy ny destin an'ny sasany izany dia mifandiso daholo ny destin an'ny olona rehetra... Mety ho izay angamba satria vitsy ny tojo ilay anjara... ao ny efa manambady vao nahita ny tena tiany. Ao ny nahita ny tiany fa tsy mitovy saranga/volon-koditra/finoana. Betsaka ny nieritreritra ny hoe nahazo ny niriako ah, refa tafiditra vao tonga saina hoe tsy izy tampoka ity. Ny ankamaroany moa dia miezaka ny mankafy ny efa azo. Tsy misy ny tonga lafatra ary ho aiza rahateo intsony koa moa ee.
An an an ka
Tena misy ny tena atao hoe fitiavana marina. Mino aho fa bedabe ny afaka hanao vavolombelona eto. Hitako t@ fotoana tsy nampoizina toy ny kotrobaratra avy any andanitra toy ny nisy voromailala nanao hoe inty ny zanako malalako henoy izy. Indray andro rehefa nahita ny mombamomba an'i Ellen Degeneres ah. Eritrereto hoe i Portia de Rossi vehivavy 36 taona, manja, manana ny ampy ary mahazaka izay ol tiany no nanambady an'i Ellen Degeneres izay ramatoa efa 51 taona.
Sao dia mba tsy @ ireny fitiavana clichE ireny aza ny anjarantsika e. Mba marina e, aoka isika tsy hiteniteny foana sy hitsara avy hatrany ny tovovavy malagasy manambady vazah somary efa mahazo taona. Mety ho fitiavana marina anie ny azy ee. Raha ohatra moa tsy zakan'ny fiaraha-monina malagasy mihintsy izay dia hoy ah hoe dia aleo izany vehivavy vazah somary mahazo taona no iarahan'ny vehivavy malagasy. Soa fianatra io rankizy a
Zavatra nalaza t@ ity taonjato faha21 ity izy ity. Izany hoe olona iray no miezaka manao zavatra "extreme" mandritra erin-taona dia mamoaka boky momba izany. Nisy olona iray izao dia hoe tsy nanao firaisana ara-nofo mandritra ny erin-taona hono izy . Ny iray hafa hoe hanao isan'andro isan'andro. Bedabe fa jereo le rohy io.
Dia mba lasa ny eritreritro hoe sao dia mba tokony hanao ny tsy fanao aza. Sarotra be anie ny mahita ny hoe tena fitiavana marina e. Ka iza no mahita kle. Taloha ah zao nieritreritra foana hoe tsy misy kaly matsiro noho ny tsaramaso sosy... mandrapahitako ny akoho gasy sy sakamalao atao rony. Modely tokony halain-tahaka i Ellen Degeneres sy Portia de Rossi.
Tsy mety ve raha miaraka @ ramatoa 51 taona ah mandritra ny erin-taona. Tsy voatery 51 taona fa hoe olona manana zanaka antitra noho izaho e. Sao dia mba any ny tena fitiavana manko. Sady afaka manangana blaogy vaovao mety ho be mpanaraka, mahatsako ny "rado ilay fitiavako fahiny" ah
Elah ve adala e... and GROSS!!
Efa hatr@ izay no fantako fa tsy maintsy ho tena supermegahyperexceptionelle ny fitiavako tena marina e. Vazimba sy mikea ary pigmee aloha no noeritreretiko voalohany kanefa rehefa natao ny fandinihana dia tena otran'ny tsy ampy metatra be ry zalah ka otran'ny tonga dia tsy miady @ piesiko. Nieritreritra indray ah avy eo hoe tena poinsa fa vampira ra zany lelika e. Indrisy fa nosimbain'ny twilight ny nofinofiko (tsy haiko mintsy hoe in no mampatsara an'iny horonan-tsary iny aloha e ). Ny hany faraheriko izany dia hoy ah hoe extraterrestre izany izy. Efa vonona mintsy ny hanagana agence intergalactical dating services... hatr@ zao anefa toa mbola tsisy namaly ny antso avo.
Teo ah vao saina tonga hoe sao dia mba efa eto aza le izy fa za fotsiny no tsy mahita... ramatoa 51 taona, lesbienne, manana sipa/vady 36 taona (ladies?).
09/09,2009 Sokajy Rediredy